२२ पौष २०७४
नयाँ बर्षमा हस्तीहरुको संकल्प बिशेष चर्चामा रहन्छन् । के तपाईलाई थाहा छ, फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्गको २०१८ मा के संकल्प लिएका छन् ? जुकरबर्गले फेसबुकको समस्याहरुको समाधान निकाल्ने संकल्प लिएका छन् । फेसबुकमा एउटा पोष्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘फेसबुकको नीतिहरु र यसको उपकरणको गलत प्रयोग भइरहेको छ ।’ फेसबुकको सुरुवात सन् २००४ मा भएको थियो । त्यसैगरी २००९ देखि जुकरबर्गले प्रत्येक वर्ष एक संकल्प…विस्तृत समाचार »
एउटा मोबाइलमा भएको फोन नम्बर अर्कोमा सार्नुपर्ने धेरैलाई परिरहेको हुन्छ । प्रायः नयाँ मोबाइल किन्दा पुरानो मोबाइलको नम्बर सार्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा एक–एक नम्बर गर्दै फेरि टाइप गर्नुपर्ने झन्झट नै धेरैजसोले स्विकारेको पाइन्छ । यो निकै झूर तरिका हो । हजारौं नम्बर यसरी एउटा मोबाइलबाट अर्कोमा सार्न कम्ता मुस्किल पर्दैन । तर, एउटा मोबाइलमा राखिएका नम्बर तुरुन्तै अर्कोमा पठाउन सकिने सजिला तरिका पनि छन्…विस्तृत समाचार »
अहिलेको युग प्रविधिको युग हो । अहिले हरेक व्यक्तिलाई ल्यापटप अनि नै उपयोगी बन्न थालेको छ । चाहे तपाईं त्रैमासिक परिक्षामा सामिल भइराख्नु भएको छ वा कसैलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ वा अनुशन्धानात्मक परियोजनाको अयोजना गर्र्दै हुनुहुन्छ या त यत्तिकै नेटको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं जहिले पनि आफ्नो आवश्यकता र बजेटको अनुसार नै ल्यापटप छानुहुन्छ । तर पहिलो नजरमा ल्यापटप खरिद गर्ने प्रक्रियामा भ्रामक पनि हुन सकिन्छ…विस्तृत समाचार »
मोबाइल आजको समयमा मानिसको जिवनको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ । सबैजसो मानिसहरु मोबाइल फोनको प्रयोग गर्छन् । नेपालमा पनि २ करोड भन्दा बढि जनसंख्याको हातहातमा मोबाईल फोन पुगेको तथ्यांक पाइन्छ । सबैको हातहातमा रहेको यहि मोबाइल फोनका बारेमा रहेरका केहि रोचक जानकारीहरू । १. मोबाइल फोनद्धारा सबैभन्दा पहिले ‘मार्टिन क्रपर’ले ३ अप्रिल १९७३ मा फोन गरेका थिए । उनी मोटोरोला कम्पनिका कर्मचारी थिए । …विस्तृत समाचार »
२४ आश्विन २०७४
यो मेसिनको जमाना हो । हरेक काम मानिसको सट्टा मेसिनबाट गराउने प्रयासहरु भइरहेका छन् । संसारभर कयौ कमपनी चालकविहीन कार चलाउने प्रयोग गरिरहेका छन् । अमेरिकामा त स्वचालित बस र ट्रकको ट्रायल पनि भइरहेको छ । कुरा यहाँसम्म त ठिकै थियो, अब त कयौ कम्पनी यस्ता पनि छन् जो स्वचालित पानी जहाजको निर्माणमा समेत जुटेका छन् । त्यस्तै कम्पनीमध्येको एक हो, फिनल्याण्डको वार्टसिला । अगस्त…विस्तृत समाचार »
बिना बिजुली यसरी गर्नुहोस् मोबाइल चार्ज
२३ आश्विन २०७४
बिहान उठेर कहीँ जाने योजन बनाएर मोबाइल हर्दा ब्याट्री लो भएको पाउनु भयो र चार्ज गर्छु भन्दा बिजुली पनि छैन । यस्तो हुँदाको अवश्ता निकै नै निराशजनक हुन्छ । त्यति बेला आफैसँग र विद्युत प्रधिकरणका कर्मचारीहरु माथि रिस पोख्नु बाहेक अरु के नै पो गर्न सकिन्छ र ? सोच्दा पनि नरमाइलो लाग्ने, छुट्टी मनाउनको लागि सुन्दर र मनमोहक पहाड र तालतलैया घुम्न जानु भएको छ…विस्तृत समाचार »
प्राणघातक रोगका जीवाणु उत्पादन भण्डारण गर्छन् शक्तिराष्ट्र, दुःख पाउँछ बाँकी विश्व
इबोला भाइसरले अफ्रिका महादेशको लाइबेरियालाई तहसनहस बनायो । इबोलाको भ्याक्सिन अमेरिकामा बन्यो । प्लेगले विश्वका कैयौं मुलुकलाई प्रभावित बनायो, प्लेगका व्याक्टेरिया अमेरिका, रुस, ब्रिटेन जस्ता शक्तिशाली मुलुकले जम्मा गरेर राखे । प्राणघातक एन्थे्रक्सको आक्रमणबाट नेपालमै कैयौंको मृत्यु भएको छ । एन्थ्रेक्स मानिसलाई मात्र नभएर आजकल जनावरलाई समेत सर्न थालेको छ । अघिल्लो वर्ष पाल्पाको गल्धा गाविसमा एन्थ्रेक्सको महामारीले पशुचौपाया सोत्तर भएका थिए । यी यस्ता…विस्तृत समाचार »
तपाईलाई थाहा छ निःशुल्क सेवा दिने नाममा तपाईकै डाटा बेचेर फेसबुकले कसरी कमाउँछ ?
१९ आश्विन २०७४
संसारमा करिब २ सय करोड मानिसले फेसबुकका सक्रिय प्रयोगकर्ता छन् । तर, यि सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताले फेसबुकलाई कुनै शुल्क भने तिर्दैनन् । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ कि फेसबुकले कम्पनी चलाउनका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउँछ । विश्वकै पाँचौ ठुलो कम्पनी बनिसकेको फेसबुकको आम्दानीको रहस्य यस्तो छः आइडिया बन्यो कम्पनी होस्टलको एउटा सानो कोठाबाट सुरु भएको आइडिया अहिले एउटा ग्लोबल परियोजना बनेको छ । संसारका करिब एक चौथाई…विस्तृत समाचार »
उसो भए यो पुरुष वीर्यको बर्बादी मात्र हो त ?
यदि क्रमिक विकास सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट सीधा हेर्ने हो भने जीवन भरको लागि एक मात्र श्रीमती हुनु कुनै चाखलाग्दो विषय हैन । पुरुषको वीर्यमा असंख्य शुक्रकिट हुन्छन् र छिटोछिटो बनिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि वीर्य केवल एक महिलाको लागि मात्र हो भन्ने सोचिएमा यसबाट अधिकतम फाइदा मिल्न सक्दैन । यसकारण किनकी आउने पिढीँको जन्म दिने समय धेरै लामो हुन्छ । अलग–अलग जीवनसाथी हुनु महिलाको लागि…विस्तृत समाचार »
यस्ता छन् ब्लूटुथ अन राख्दा हुने गम्भीर खतराहरु, यसरी बच्न सकिन्छ
४ आश्विन २०७४
मोबाइल फोनको ब्लुटुथ अन राख्नु खतरनाक पनि हुन सक्दछ । सेक्युरिटी कम्पनी अर्मिसका अध्ययनकर्ताहरुको समूहले गत मंगलबार एउटा यस्तो मैलवेयर फेला पारेका छन् जुन ब्लुटुथसँगथ जोडिएका डिभाइसमा आक्रमण गर्न सक्दछ । यसले स्मार्टफोनमा मात्र होइन, स्मार्ट टीभी, ट्याबलेट, ल्यापटप, लाउडस्पीकर र कारमा पनि आक्रमण गर्न सक्दछ । संसारमा जम्मा ५.३ अर्ब डिभाइस छन्, जुन ब्लुटुथ प्रयोग गर्दछन् । यो मैलवेयरको नाम ब्लूबार्न हो । यसको…विस्तृत समाचार »